MDT, vahaolana feno ho an'ny tetikasan'ny Topografia sy ny injeniera - Geofumadas
Aprily, 2014 AutoCAD-Autodesk, Featured, Engineering, Pirinty voalohany, topografia
Mihoatra noho 15,000 50 ireo mpampiasa any amin'ireo firenena, ary misy amin'ny teny Espaniola, Anglisy, Frantsay ary portogey amin'ny teny hafa, Tanànan dia iray amin'ireo tena mankasitraka ny orinasa nanao raharaham-geoengineering fampiharana Hispanic mpandahateny.
APLITOP manana ao amin'ny portfolio-ny fianakaviana efatra ny fampiharana: fandrefesana tetikasa, an-tsaha fangatahana amin'ny toerana tanteraka na GNSS fitaovana, tonelina ary photogrammetry nomerika. Amin'ity tranga ity dia miresaka momba ny Tanànan, izay tena mpampiasa dia bahoaka fanompoana, fanorenana orinasa, injeniera, trano, Tanàn-dehibe sy ireo orinasa natokana ho earthworks, fihadiam-bato, fitrandrahana harena ankibon'ny tany, tontolo iainana, etc., ary koa ny tsy miankina matihanina.
Ny MDT dia azo alaina amin'ny dikan-teny samihafa amin'ny AutoCAD, anisan'izany ireo farany indrindra, ary koa amin'ireo sehatra hafa mora kokoa, toy ny BricsCAD sy ZWCAD.
Ny MDT dia mifanaraka amin'ny zavatra ilain'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny sehatra manan-danja izay azo ianteherana amin'ny dikan-tsoratra standard na matihanina, sy ny andiam-panandramana matevina ho an'ny topography, sary ary rahona.
La standard version modeling mamela ny lalana mampiasa hevitra nalaina misy tanteraka gara na GPS, hiteraka contours, hahazo longitudinal sy transverse mombamomba, kajy boky samy hafa, na ny mombamomba harato, ary sary an-tsaina lalana in 3D.
La professional version dia natao hanampiana ny mpampiasa amin'ny dingana rehetra amin'ny fanatanterahana ny tetikasan'ny làlana, fambolena, fitrandrahana, harena an-kibon'ny tany, sns. Izy io dia ahitana ny endri-javatra rehetra amin'ny dikan-tsoratra standard ary koa manana fitaovana ho an'ny famolavolana ny fananganana horizontal sy vertical, fampisehoana tontolon'ny tetikasa maharitra sy ny tetezana, mamokatra ny faritra voaova, lisitry ny cubación, napetraka, sns.
El topography module dia ilaina amin'ny fanodinana ny fijerena ny toeram-pijerem-paritra rehetra, ny famaritana kôlôdina eo amin'ny faritra, ny fanolanana polygones sy ny tambajotra, ary koa ny fanatanterahana ny fiovan'ny fandrindrana eo amin'ny rafitra ara-jeôdika sy projetée.
El sary modely dia ahafahanao mamoaka sary voasokitra amin'ny toerana, mametraka sary miaraka amin'ny toerana, mizara sy mametaka, manova ny safidy, manamboatra ny fanovana sy ny fametahana, ny fidirana amin'ny serivisy tranonkala (WMS), sns.
El toetr'andro dia ahafahan'ny mpampiasa mijery sy manara-maso ireo rahona heverin'ny teknolojia, ny scanner na ny fampiharana ny photogrammetry, ny fahafahana mitantana an-tapitrisany ny antontan-taratasim-pampindrana an-tapitrisany amin'ny endrika tena mahazatra. Ireo teboka ireo dia azo lazaina amin'ny loko voajanahary, hery na sokajy voajanahary. Izy io koa dia mamorona profiles lava-pitenenana sy mivezivezy avy amina polisy na axie, ary koa modely nomerika izay azo alaina amin'ny CAD.
Previous Post«Previous Antsoy ny serivisy WMS amin'ny Microstation
Next Post SuperGeo miditra fifanarahana amin'ny GPS PL mba hanolotra vahaolana ho an'ny iOS turnkeymanaraka »
7 valiny "MDT, vahaolana feno amin'ny tetikasa fandrefesana sy ny injeniera"
Adriana Salazar Light hoy izy:
INDRINDRA AHO IZAO, INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA IZAO ARY VALIDA AZY ARY MAMPIANARANAO IZAO, AZONAO VONDRONA FAMPISORANA NA AZONAO MBOLA MITADIKA NY FANAVOTANA IZANY DIA TOKONY FAMPISEHOANA NY FANAVOTANA NY FANAVOTANA.
Azonao atao ny mifandray amin'ny mpivarotra mpanentana izay tsy firenena.
António Petiz hoy izy:
Gostaria de testar na fandaharana MDT TOPOGRAPHY.
Tahaka ny azonao atao.
Carlos Perez hoy izy:
programa misy karazan-tsivana maro
Vladimir Garcia hoy izy:
Tiako ny lalana avy any Kolombia, azafady azafady
Hello Ana Maria, Tonga soa eto amin'ny Aplitop!
Ny zavatra voalohany dia ny misaotra anao noho ny tombotsoanao amin'ny marika, vokatra ary serivisy, izay resy lahatra dia hahafeno ny zavatra antenainareo.
Afaka mandefa mailaka izahay soporte@aplitop.com, handefa anao ny vaovao momba ny fianarana an-tserasera, izay ambaran'izy ireo ny fandidiana sy ny faharetan'izy ireo, izay ny 2 volana, raha manana fanontaniana ianao dia ho faly hanampy anao.
15.000 amin'izao fotoana izao dia manana ny fahazoan-dalana miasa maneran-tany, mamela anay hanohy ny ho heverina ho toy ny boky ara-teknika valiny, kalitao sy ny asa fanompoana ao amin'ny fampandrosoana ny rindrambaiko fangatahana fanadihadiana sy sivily Engineering.
MPITONDRA ara-barotra APLITOP
Ana María Segura Marín hoy izy:
Te hahafantatra aho raha misy fampianarana MDT maimaimpoana ho an'ireo tsy an'asa… an-tserasera na mivantana… ho an'ireo tsy an'asa